1Ruushka XBIT, iska leh shirkada N. V. Shirkadda1X Corp. oo shati ku leh Curaçao. Ujeedadaadu ma? Guul aduunyada ciyaaraha internetka. Sidee? Iyada oo leh suuqa ugu weyn ee suuqgeynta iyo dhibcaha suurtagalnimada badan ee naga badan (oo iyagu) waligiis ma arkin. Waxaana ka hadlaynaa gunno soo dhaweyn ah taas […]
shabakada ballaaran ee paris Unibet Casino Unibet bulshada kala jajabisay. Iyo shatiga ku saleysan Malta (SMG), shirkadda iswiidhishka ayaa leh qaar ka mid ah ciyaarta ugu wanaagsan ee ciyaaraha tooska ah, maadaama ay adeegsato seddex ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan sida Net Entertainment, Microgaming o Yggdrasil. Laakiin rarka NetEnt ayaa ka badan saddex-meelood meel […]
Markuu Bwin, xitaa ka hooseeya magaca hore ee Betandwin, ku dhashay Vienna gudaha 1998, si dhibyar qofna wuu saadaalin karaa jidka guusha. In ka badan 22 malaayiin macaamiil ayaa ku maalgeliyay isboorti, kaasoo ka mid noqday ciyaartoydii hormuudka ka ahayd tartankii caalamiga ahaa. In kasta oo sharafnimadu ay tahay wax iska caadi ah […]
Gadaal 888sport iyo sumadda, koox caan ah oo adduunka ah 888 Holdings PLC. Laga soo bilaabo 2008, shirkadda waxay bixisaa khamaar iyo khamaar iyo sharad isboorti. astaanta ayaa si dhakhso leh u heshay sumcad sida paris guriga oo la ixtiraamo oo soo jiidasho leh. Falanqaynteena, waxaan si dhow ula socon doonnaa howl wadeenka arrimaha muhiimka ah ee maaraynta […]
Haddii magacyada waaweyn ee warshadaha isboorti ee caalamiga ah ee Paris, kama saari karaan iyo bixiyeyaasha sheekaysiga khadka tooska ah ee Betfair.This England, Suuqa saamiyada ee loo yaqaan 'Paris Stock Exchange' oo loo aqoonsan yahay nidaamka. Hoos Ka Dhageyso, Aynu si dhow u eegno isboortiga dhammaan qaybaha ku habboon. Waa mudnaanteena? Sidee kalsoonida loogu fidiyaa Paris? Ma jiraa gunno […]
In kasta oo khibrad hodan ah, Nooca waxaa laga heli karaa gudaha Spain bishii la soo dhaafay. Dalkeena, waxaa ogolaaday Agaasimaha Guud ee Khamaarka (ILAAHAY) waa dhamaadka xogta, sidaa darteed waxaan aamini karnaa amniga aaladda. Habka isboortiga ee uu doorbiday Isbaanishka iyo xitaa xiisaha ka sii badan ee Paris ayaa hagaajin kara […]
Inaad ka ciyaarto door aad u raaxo badan guriga waa wax qof walbaa yaqaan, laakiin sidoo kale waa run in jawiga ka jira khamaarka uu baaba'o. Laakiin waa maxay sababta aan u sugno usbuuca dhammaadka si aan u aadno goobta qamaarka oo aan ugu raaxeysanno ciyaarta? Tani waa waxa shirkadda circus, yaa leh […]
Interwetten waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee bixiya khamaarka isboortiga ee Yurub. Shirkadda Austrian waxaa lagu asaasay 1990 por Wolfgang Fabian; wakhtigaas isagoo arday ah oo cilmiga dhaqaalaha ah, ganacsatada da'da yar ee ku dhiirrigeliyay inay galaan warshadaha ciyaarta. Gudaha 1996, Waxaan khadka tooska ah uga galay internetka oo ka bilaabay kii ugu horreeyay Paris. […]
Sida aan u horumarinayno teknolojiyad cusub, la qabsiga Luckia wuxuu tagi karaa websaydhkiisa si uu u gaaro waxa uu maanta yahay. Waxaa muhiim u ah shirkadaha inay bartaan adeegsadayaasha dhammaan noocyada isbeddelada si ay uga dhigaan khibradooda ciyaaraha sida ugu macquulsan uguna macquulsan.. Sidoo kale, ciyaarta qolka ciyaarta, qol […]
Hadaad tagto websaydhkooda, waxaad dhawaan arki doontaa in ay jirto hooska badan iyo cabitaanno badan, laba astaamood oo aasaasi u ah ciyaartoy kasta oo raba inuu ku raaxeysto kulan ciyaar. Ujeedada goobtani waa in lasiiyaa adeega ugu fiican ee ciyaartooyda isla markaana raaxo ku dheehan tahay 5 sano khibrad u leh warshadan […]